In badan oo ka mid ah Qalabka AirTag ayaa Muuqda Kahor Dhacdada Caawa | Waxaan ka socdaa mac
Xaqiiqdii khabiirka caanka ah ee caanka ah Jon Prosser xalay ma uusan seexan karin. Wax walba waxay muujinayaan in ugu dambeyntii riyadoodii AirTags lagu soo bandhigi doono galabta munaasabadda Apple «Guga oo la rakibey»Kaas oo bilaabmi doona toddobada galabnimo waqtiga Isbaanishka.
Ka dib laba sano oo xan ah oo ku saabsan muuqaalka suurtogalka ah ee suuqa ee hareeraha yar yar ee Apple loo yaqaan AirTags, tilmaamayaasha oo dhami waxay muujinayaan in ugu dambayn la soo bandhigi doono galabta. Jidka ugu dambeeya ee foornada ka soo baxa, waa xarigyadan maanta u muuqday inay awood u leeyihiin inay ku dhejiyaan AirTag boorso ama shandad, sida haddii ay tahay sumad.
In kabadan laba sano oo xan ah, dad badan ayaa aaminsan in maanta ay tahay maalintii Apple AirTags, nooc ka mid ah maxalliga ah oo la mid ah Dusiyeen ka jira suuqa, waxaa loo soo bandhigi doonaa kuwa la socda muhiimada galabta. Qaar ka mid ah sawirrada qalab cusub oo loogu talagalay AirTag-yadaas ayaa hadda la daabacay.
Qalabkaan waxay u egtahay shandado shandado oo ka sameysan nooc silikoon ah sida Apple Watch suumanka aan wada ognahay. AirTag lafteedu waxay ku dhex oolli doontaa aagga wareegsan, suunka dheerna wuxuu u adeegi lahaa inuu "ku xirto" shandad ama shandad gacanteeda ku jirta.
Xargaha si loogu xiro AirTag shandada
Xargahaas waxaad ku xirxi kartaa AirTag mashiinka shandadda, tusaale ahaan.
Xarkahaas waxaa loo fahmay inay soo saaraan soosaarayaal dhinac saddexaad ah oo aysan ahayn iibiyayaal rasmi ah oo Apple ah. Warbixin ay soo saartay Bloomberg sanadkii la soo dhaafay ayaa lagu sheegay in Apple ay soo saarayso qalabkeeda AirTags u gaarka ah, oo ay ku jiraan kiish maqaar ah iyo a qalabka keychain.
AirTags waxaa loogu talagalay inay raacdo waxyaabaha qiimaha leh ee isticmaalaha, sida keychain. Waxaa ku shaqeeya Bluetooth iyo ultra-wideband waxayna ku muuqan doonaan barnaamijka "Raadinta" ee Apple. AirTag wuxuu ku gudbiyaa aqoonsigiisa gaarka ah Bluetooth-ka, kaas oo uu ka soo qaadan karo qalab kasta oo macruufka ah ama Mac u dhow. Goobtaadu waxay ka muuqan doontaa barnaamijka Raadi qalab kasta oo ay leedahay AirTag.
Dabeecaddaasi waxay inta badan la mid tahay waxa ay raad-raacayaasha kale ee Bluetooth bixiyaan. Si kastaba ha noqotee, AirTags waxay sii socotaa mahadnaq ka mid noqoshada qalabka 'Ultra-Wide band chip'. Qalabka UWB wuxuu kuu oggolaanayaa meeleyn sax ah oo tilmaame goob ah markay u jirto 20 mitir meesha cutubku ku yaal. Xeerka noocyadi udambeeyay ee iOS waxaa lagu arkay inay jiri doonto khibrad dhab ah oo la kordhiyay oo ku saabsan arjiga «Buscar«, U oggolow isticmaale inuu haysto iPhone-kiisa oo uu arko fallaadh si toos ah u tilmaamaya meesha shayga la gelinayo xaqiiqda la kordhiyay.
Waxaan rajeyneynaa in ugu dambeyn galabta la soo bandhigi doono AirTags. Waxaan aad u xiiseeyaa inaan arko sida Apple u samayn karo qalab noocaas ah oo waxtar u leh helitaanka boorsada lumay, tusaale ahaan, taa beddelkeedana looga hor tago in loo isticmaalo «inaad basaasid»Goobta saxda ah ee qofka ogolaansho la'aan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Qalabyo badan oo loogu talagalay AirTags ayaa soo ifbaxaya ka hor dhacdada galabta